Horudhac: Chelsea vs Wolverhampton Wanderers… (Macallinka cusub ee Blues, Thomas Tuchel oo shaqadiisa ka bilaabaya inuu wajaho Wolves) – Gool FM
Haaruun January 27, 2021
(London) 27 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa bilaabaysa sidii ay u noolaan lahayd la’aanta Frank Lampard marka ay wajahayaan Wolves.
Macallin Thomas Tuchel oo xalay uun la magacaabay ayaa shaqadiisa ugu horreysa ee Kooxda Blues ka bilaabi doona inuu Wolverhampton Wanderers ku soo dhoweeyo garoonka Stamford Bridge kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Tababare Frank Lampard ayaa laga cayriyey shaqadiisa Isniintii kaddib markii uu kooxda Chelsea ku hoggaamiyey natiijooyin liista.
Garsooraha: Andrew Madley (England)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea N’Golo Kante ayaa la maqnaanaya dhaawac ka soo gaaray muruqa bowdada kulanka ugu horreeya ee Tababare Thomas Tuchel uu qabanayo Blues caawa.
Christian Pulisic ayaa shaki ku jiraa sababo la xiriira dhaawac fudud oo lugta ah oo soo gaaray Axaddii.
Saxiixa cusub ee Kooxda Wolves, Willian Jose ayaa la filayaa inuu seego kulankan, maadaama uusan wali helin warqadda ogolaanshaha shaqo.
Daniel Podence ayaa ku dhow inuu soo laabto kaddib dhaawac kubka ah, laakiin Raul Jimenez, Jonny iyo Marcal ayaa weli dhaawac ku maqnaan doona muddo dheer.
>- Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Wolves horyaalka Premier League, shan kulan waa ay ka guuleysatay halka kulanka kale ay barbaro galeen.
>- Wolves ayaa guuleysatay kulankii bishii la soo dhaafay ka dhacay garoonka Molineux ee horyaalka, waxaana ay ku adkaadeen 2-1, Pedro Neto ayaana dhammaankii ciyaarta ugu shubay Blues.
>- Wolves ayaa eegeysa inay minin iyo marti garaacdo horyaalka Chelsea markii ugu horreysay tan iyo fasal ciyaareedkii 1974-75.
>- Chelsea ayaa guuleysatay kaliya labo ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka, waxaana ay barbaro galeen hal kulanka, halka ay guuldarro la kulmeen shan kulan.
>- Waxa ay guuldarro la kulmi karaan labadooda kulan ciyaaraha sare ee horyaalka oo ay ku ciyaarayaan garoonkooda sanadka kaliya markoodii saddexaad.
>- 29-dhibcood inay ka haystaan kala bar marka la ciyaaro horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan waa heerkoodii labaad ee ugu hooseeyey inta uu kooxda milkiyaddeeda leeyahay Roman Abramovich.
>- Chelsea ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 13 ka mid ah 29 kulan oo ay ciyaartay tartammada oo dhan, waana in la mid ah inta ay shabaqooda gool ka ilaashadeen 55 kulan oo ay ciyaareen kal ciyaareedkii hore.
>- Macallin Frank Lampard oo shaqada laga cayriyey ayaa guuleysatay 44 kulan 84 tartammo rasmi ah oo uu kooxda hoggaamiyey, isagoo barbaro galay 17 kulan, guuldarrooyinna la kulmay 23 kulan.
>- Waxa ay todobo kulan oo horyaalka ah garoonkooda kula kulmeen guuldarro 28 kulan oo ay kooxdu ka hoos ciyaareysay Lampard waana in ka badan intii ay la kulmeen 57 kulan wadar ahaan marka la isku geeyo labadii macallin ee isaga ka horreeyey Maurizio Sarri iyo Antonio Conte.
>- Tammy Abraham ayaa dhaliyey lix gool saddex kulan oo uu ku soo bilowday horyaalka oo ay wajaheen Wolves.
>- Timo Werner ayaa gool dhalin la’ 11 kulan oo xiriir ah oo uu ciyaaray horyaalka Premier League.
>- Wolves ayaa halis ugu jirta inay khasaaro la kulanto saddex kulan oo xiriir ah horyaalka markeedii labaad iyadoo ka hoos ciyaareysa macallin Nuno Espirito Santo.
>- Waxa ay khasaaro la kulmin sagaal kulan illaa iyo hadda xilli ciyaareedkan, marka la barbardhigo guud ahaan intii ay horyaalka la kulmeen fasal ciyaareedkii 2019-20 oo dhan.
>- Waxay heleen 23 dhibcood 13 kulan oo horyaalka ah oo ay booqdeen London tan iyo markii ay soo dallaceen 2018, kaliya labo jeer ayaa laga adkaaday.
>- Adama Traore ayaa ku guuldarreysatay inuu gooldhaliyo ama caawiyo mid kasta oo ka mid ah 25-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray horyaalka Premier League.